Ny governemanta dia hanome fanohanana avy amin'ny fanjakana amin'ny famoronana karazana milina sy fitaovana madinika malaza indrindra - gazety "Potato System"
в Ny fanjakana, vaovao, Vaovao Rosiana, Tekinika / teknolojia
Manomboka amin'ny 2022, ireo mpanamboatra milina sy fitaovana fambolena dia hahazo famatsiam-bola federaly ho an'ny fampandrosoana sy famokarana karazana vokatra vaovao, ary koa ny fanavaozana ny trano famokarana efa misy. Nankatoavin'ny praiminisitra Mikhail Mishustin ny fitsipika hanomezana fanampiana ho an'ireo tanjona ireo.
Ny fanohanan'ny fanjakana dia mikendry ny hamorona karazana milina sy fitaovana madinika malaza indrindra (betetika, ovy sy rongony, fitaovana ho an'ny fambolena sy fambolena), ary koa ny fanatsarana ny vokatra milina fambolena efa misy.
Ny valin’ny fifantenana no hamaritra ireo mahazo ny fanohanan’ny fanjakana, izay tanterahan’ny vaomiera manokana iraisan’ny sampan-draharaha naorin’ny minisiteran’ny Indostria sy ny Varotra.
Famatsiam-bola no homena ao anatin’ny fandaharan’asan’ny fanjakana « Fampandrosoana ny indostria sy ny fampitomboana ny fifaninanana ».
Ny vola fanampiana dia handrakotra hatramin'ny 60% amin'ny vidin'ny fanavaozana ny trano famokarana, ny fampivoarana sy ny famoahana vokatra vaovao, ao anatin'izany ny vidin'ny asa fikarohana sy ny fampandrosoana, ny famokarana prototypes, ny maodely ary ny fijoroana ary ny fanofana fitaovana.
Ny fe-potoana fampiharana ny tetikasa fanavaozana ny famokarana dia tsy tokony hihoatra ny dimy taona, ary ny tetikasa hamorona vokatra vaovao - valo taona. Famatsiam-bola amin’ny fanatanterahana ireo tetikasa ireo dia homena tsy mihoatra ny roa sy telo taona, tsirairay avy.
Tags: Fanohanana ny governemantampijinja ovymilina fambolena an-tranoGovernemanta RFmpijinja betiravy
Hanome 1 lavitrisa roubles mahery ny governemanta hanonerana ny fandaniana amin'ny famoronana sy fanavaozana ny toeram-pambolena.
Nandritra ny fivorian’ny Governemanta natao ny 16 desambra lasa teo, dia maro ireo olana lehibe nodinihina, anisan’izany ny fanohanana ny fambolena. Mikhail Mishustin, ...
Mandraisa anjara amin'ny fandinihana hoe "ny mety hisian'ny vola eo amin'ny sehatry ny fambolena any atsimon'i Russia"
Momba ny vokatry ny asan'ny complex agro-industrial an'ny Federasiona Rosiana tamin'ny 2021 sy ny asa lehibe ho an'ny 2022